Ikhaya leholide laseNtabeni "Lago Salto" 80km ukusuka eRoma - I-Airbnb
Ikhaya leholide laseNtabeni "Lago Salto" 80km ukusuka eRoma
Poggio San Giovanni di Pescorocchiano, Lazio, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Luigi
U-Luigi unokuphawula okungu-40 kwezinye izindawo.
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Dis 30.
Ifulethi elizimele endlini yasendulo yasendulo, eliseduze nesonto le-hamlet yasePoggio San Giovanni, idolobhana elihle elisesigodini saseSalto Cicolano, endaweni ephakeme ngamamitha angama-800 / lm. Amakhilomitha ambalwa ukusuka eLake Salto
Isakhiwo sifakwe ikhishi, i-microwave noma i-oven kagesi, isiqandisi, umshini wekhofi we-capsule, ithelevishini, umshini wokuwasha, izitsha.
Indlu yokugezela eneshawa ifakwe isomisi sezinwele, amathawula, ithawula lokugeza kanye nesethi yezilokotho. Amashidi ayanikezwa.
Ingadi enkulu enetafula, amabhentshi kanye nezoso ziyatholakala.
Kukhona inethiwekhi ye-wi-fi yamahhala ye-inthanethi, indawo yokupaka yangasese (engagadiwe). Ukuqashwa kwamabhayisikili (mahhala).
Ukuthula okuphelele kuqinisekisa iholide eliphumuzayo, indawo ezungezile ecebile ngezilwane nezitshalo ikwenza uzizwe ubumsulwa bemvelo engonakalisiwe. Ifulethi lifakwe: Isistimu yokushisa ezimele enama-radiator kanye neziko elibaswa ngezinkuni.
ubusuku obungu-7 e- Poggio San Giovanni di Pescorocchiano
I-Poggio San Giovanni iyingxenye kamasipala wase-Pescorocchiano -Rieti-,
amakhilomitha ayi-13 nje ukusuka ku-A / 24 Rome - L'Aquila motorway ophumayo,
U-Freeway Terni, e-Rieti ukuya e-Avezzano
ukuwela sonke isigodi iSalto Cicolano.
Izindawo okufinyeleleka kuzo:
Ichibi laseSalto Km 5/10
I-Terme di Cotilia esukela enkathini yamaRoma 38 Km
I-Campo Felice (i-ski resort) Km 38
I-Roma, i-colosseum, izinkundla zombuso - (umgoqo womgwaqo omkhulu waseRoma) km 80
I-Aquila Km 40
I-Rieti (isikhungo sendawo sase-Italy) Km 38
I-Alba Fucens Indawo yokuvubukula egcinwe kahle yedolobha lasendulo laseRoma,
National Park of Abruzzo, Lazio kanye Molise km 120.